Doogee Y6 Piano Black nyochaa: kenkowaputa oji na 8-isi processor maka ihe na-erughị € 130 | Gam akporosis
Doogee Y6 Piano Black review: kenkowaputa nwa na 8-isi processor maka ihe na-erughị € 130
Miguel Gaton | | Nyocha
N'ịga n'ihu na nyocha ama anyị, taa ọ bụ ntụgharị nke Doogee Y6 Piano Black, mbipụta pụrụ iche na-egbu maramara ojii na mgbakwunye na agba a pụrụ iche na-ewetakwara anyị ebe nchekwa karịa ụdị nke mbụ, ebe Piano Black na-aga 4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM. Na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, ọnụ ahụ na-apụkwa maka ya CPU isi asatọ, ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na atụmatụ nke ndị hụrụ onwe ha n'anya ga-ahụ n'anya, a 8 MP n'ihu igwefoto na 88 ogo n'akuku nke ele. Na akwụkwọ ozi a nke iwebata, ndị Doogee Y6 bụ ezigbo adabara ọnụ maka a na-eto eto na-ege ntị na-achọ ezi ama na ezigbo ọnụahịa, ebe anyị nwere ike nweta ihe na-erughị € 130 site na ịpị njikọ a.
1 Doogee Y6, ama nke selfies
2 Black Piano, nwa ojii na-egbu maramara
3 Ihe kachasị mkpa nke Doogee Y6
6 Mmechi na Doogee Y6 Piano Black
7 Ndabere foto nke Doogee Y6 Piano Black
Doogee Y6, ama nke selfies
Dịka anyị kwurula, e meela Y6 ihu igwefoto maka iji onwe gị. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ogo dị elu karịa 8 MP na ọkụ ọkụ kama ọ ya 88 ogo ogo ikiri na-enye anyị ohere ịme otu selfies, ya mere ị gaghị ahapụ ndị enyi gị ọ bụla. Igwefoto azụ bụ megapixels 13 na ọkụ ọkụ LED abụọ ma mezue ozi ya n'ụzọ zuru oke, na-enweghị oke ịkwanye ihe niile.
Black Piano, nwa ojii na-egbu maramara
Isi njirimara nke mbipụta Piano Black bụ kenkowaputa nwa agba Ọ dị ezigbo mma dị ka anyị pụrụ ịhụ na vidiyo gara aga nke Doogee nyere. Nke a rụchaa na-enweta ekele na-esi ọtụtụ usoro nke itoolu anodizing nzọụkwụ na a Polish na 7000 usoro aluminum. Ekele maka polishing, a na-enweta ihe ngosi enyo a mara mma, ebe usoro anodizing na-echebe ọnụ site na nchara. Dị ka anyị kwuru, ọ bụ ezigbo mma mara mma nke na-adị mma n'anya mana ọ nwere isi okwu na nke ahụ bụ na ọ na-enwe ntụpọ mkpịsị aka na nke ahụ nwere ike imebi njedebe ikpeazụ.
Na mgbakwunye na agba, obere mbipụta Piano Black dịkwa iche na nke ahụ gbagoo 4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM mgbe ụdị nkịtị ga-abịa naanị 2 GB nke Ram na 16 GB nke ROM, nke gosipụtara ọtụtụ na ọkwa arụmọrụ. Ọdịiche ikpeazụ bụ ọnụahịa, ebe ọ bụ na mgbe ọnụahịa Piano Black na-efu € 130, nlereanya nlereanya ị nwere ike inweta ya naanị € 105.
Ihe kachasị mkpa nke Doogee Y6
Doogee Y6 nwere ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na a Igwe 2.5D na HD mkpebi nke Pikselụ 1280 x 720 nke arụpụtara Sharp na nke na-ejikọta n'ụzọ zuru oke na akụkụ aluminom. Nhazi ahụ bụ MediaTek MT6750 octa isi, nke ya na 4 GB nke RAM na-eme ka Y6 na-enye ezigbo arụmọrụ, ihe karịrị iji jiri ihe ọ bụla n'ime egwuregwu kachasị ike ugbu a.
El akara mkpisiaka dị na azụ ekwentị, n'okpuru igwefoto ahụ na anyị nwere ike hazie ya iji malite ngwa, nke mere na ọ dabere na akara akara mkpịsị aka ma ọ bụ ihe ọzọ achọpụta, anyị ga-emepe ngwa dị iche. N'ime e nwere batrị dị n'ime bụ 3.200 mAh, zuru oke maka iji Y6 eme ihe mana ọ nwere ike ịbụ obere ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ọrụ. Sistemụ nrụọrụ bụ Android 6.0.1 Marshmallow na ụfọdụ nta mgbanwe nke ika, ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe na-erughị na ndị ọzọ ụdị na-emepụta dị ka Bluboo. Ọ na-abịa na ọtụtụ ngwa arụnyere na mbụ mana ụfọdụ n'ime ha, dị ka WPS Office, enwere ike iwepụ n'enweghị nsogbu ma wepụta ohere ọ bụrụ na ịchọghị iji ha.
Na ọkwa njikọta, a na-enye Doogee Y6 nke ọma na WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0 na 4G LTE Cat. 6. O nwekwara nkwado maka redio Dual-SIM na FM
Kenkowaputa nwa agba
Igwefoto dị ike n'ihu maka iji onwe gị
8-isi ihe nhazi
Agba agba ọtụtụ na mkpịsị aka
Mmechi na Doogee Y6 Piano Black
Y6 bụ ọnụ ebe akara ahụ doro nzọ na imewe na onyonyo dị ka ebe siri ike iji kwenye ndị ahịa. The Doogee Y6 na ọbụna karị ma ọ bụrụ na ị họrọ maka Piano Black mbipụta tinye onye ọ bụla anya. Ọzọkwa ụfọdụ ihe ijuanya dị ka igwefoto onwe nyere aka ido onwe ya n'ahịa ndị ntorobịa. Uru ya maka ego dị mma ma nke ahụ bụkwa isi na ihu ọma nke Y6. Dị ka ihe ọjọọ na-egosi ya oke ibu gini kwa ka mmara ọgbaghara mfe site na iji mkpịsị aka gị metụ ya aka, mana ọ ka bụ nhọrọ akwadoro nke ukwuu.
Ndabere foto nke Doogee Y6 Piano Black
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nkọwa niile nke Doogee Y6 Piano Black, lee ihe a gallery na foto anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Doogee Y6 Piano Black review: kenkowaputa nwa na 8-isi processor maka ihe na-erughị € 130
Google Maps ga-egosi anyị ebe anyị ga-adọba ụgbọala
ZTE na-ekwupụta nkọwa nke Hawkeye, ama ya site na igwe mmadụ